Zvakanakira kutenga yemagetsi moped bhasikoro | ebike Shuangye
musha Blog nhau Zvakanakira kutenga mota yemagetsi moped
Zuva ： 2020-08-20 Zvikamu:nhau Views: 2,325 maonero
ne yemagetsi moped bike iri kuve inozivikanwa kwazvo zuva nezuva. Vanhu vari kutora kufarira kwakawanda mukutenga yemagetsi moped bhasikoro. Aya mabhasikoro ari nyore kuchovha munzvimbo dzakazara. Iyo zvakare yakanaka nzira yekukubatsira kuti uzvichengete iwe uine hutano. Mabhasikoro emagetsi ane fashoni pasi rese. Mabhasikoro emagetsi anobatsirwa nemamota. Unogona kukwira bhasikoro rako uchishandisa pedals kana kushandisa throttle, uye nzira mbiri dzinogona kutyaira mota. Bhasikoro moped bhasikoro inoshandisa rechargeable lithium-ion mabhatiri, akagadzirwa anogara zvinhu. Iyo furemu yemagetsi moped bhasikoro inoumbwa nesimbi yakasimba, senge aluminium. Iye zvino mazhinji epakati-epamusoro-magumo emabhasikoro emagetsi anoshandisa aluminium alloy furemu.
Tichifunga nezve njodzi dzekufambiswa neveruzhinji pazera reCOVID-19, kutenga mota yakabatsira bhasikoro kutenderera uye kugara uchimhanya panguva yekuvhara, uchiri kufambidzana munharaunda, hausi wega - kunyanya muguta. Saka mota yakabatsira bhasikoro inogona kubatsira zvakanyanya uye ingadhura. Iyo zvakare vanhu yekufambisa yekutsvaga nzira itsva dzekubuda kunze, kutenderera, uye kurovedza muviri. Kuenzaniswa neyakajairika bhasikoro, kunyangwe magetsi anomhanyisa bhasikoro kungave kuri kudhura, asi uchienzaniswa nemotokari, inongoda chete yekudyidzana yekutanga investa zvakare kunge iri shoma mari mukati mehurefu hwehure sezvo pasina kungo shandisirwa mutengo kana pamwe mitengo yemafuta. Mushure mezvose mutengo wemotokari yakabatsira magetsi bhasikoro zvakawandisa kupfuura mutengo wemafuta emotokari.
Kuisa mari mune yemagetsi moped bhasikoro ndeimwe yeakanakisa kutenga aungaite. Kana iwe uchinakidzwa nekukwira bhasikoro asi uchivenga kumanikidza uye ziya, iwe unonzwa kana iko kukwira kuoma sekukwira makomo pane emagetsi mabhasikoro ari kutengeswa anotora iyi strain kure ndokudzorera kunakidzwa kumashure kwako kuchovha bhasikoro. Chinhu chakanakisa pamusoro pemabhasikoro emagetsi ari kutengeswa ndeekuti mutasvi anogona kusarudza kuti isimba ripi ravanoshandisa uye nemagetsi emagetsi avanoshandisa. Izvi zvinogona nyore kuchinjaniswa kune zviri nyore kana zvakaoma kutasva. Vazhinji vanhu vemumadhorobha vanonetseka kuchovha bhasikoro renguva dzose vanozoisa mari mumabhasikoro emagetsi kutengeswa kuitira kuti vagone kunakirwa nerunako rwekutasva bhasikoro, kungave kuri kwekunakidzwa kana kwakakosha mafambiro ekufambisa.
Zvakare nekunakidzwa zvikuru kukwira bhasiketi yemagetsi inotakura zvinhu zvakare zvine hunyoro kune zvakatipoteredza pane kushandisa mudhudhudhu, zvifambiso zvevoruzhinji kana mota yekufamba. Dzimwe nyika hurumende dziri kudzosera zvirongwa zvinokurudzira vanhu kuti vashandise mota dzemagetsi kutakura vanhu panzvimbo dzemotokari, uye izvi zvichabatsira kudzikisa mweya uye kuchengetedza nharaunda kubva mukukuvara kunokonzerwa nemotokari. Kuva nemotokari yemagetsi inotakura bhasikoro uye kuishandisa panzvimbo yemotokari zvinoreva kuti unochengetedza mafuta, inishuwarenzi, uye mutero wemigwagwa, uye ucharova mutsetse wetaundi, iwo mukana unokosha kune vafambi.
Kana iwe uine chinangwa chekutenga yemagetsi moped bhasikoro, kune kupeta ebike, gomo yemagetsi bhasikoro uye guta remagetsi bhasikoro kusarudza kunoenderana nezvaunoda kushandisa. Kana iwe unofarira emagetsi mabhasikoro, shanyira edu Official Website or Videos.
Tags:yemagetsi moped bhasikoro Magetsi moped emagetsi anotakura mabhasikoro
Prev: Dzakamhanya zvakapetwa ka750w mota yemagetsi mafuta tire bike
Next: Maitiro ekusarudza mota mota bhasikoro yekutengesa kutungamira